कोरोना कहर : आफ्नै आदेश उल्लंघन गर्दै सरकार, जनता बचाउन कहिले बन्ला संवेदनशील ? – Health Post Nepal
कोरोना कहर : आफ्नै आदेश उल्लंघन गर्दै सरकार, जनता बचाउन कहिले बन्ला संवेदनशील ?
२०७८ वैशाख १३ गते १३:३०
गत वैशाख ६ गते सरकारले सभा, सम्मेलन, सेमिनार, बैठक लगायतका कार्य गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍याे। र, भौतिक रुपमा नै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने भए २५ जनामात्र सहभागी हुने गरी गर्न भन्यो। तर उक्त आदेश सरकारबाटै उल्लंघन भइरहेको छ।
सरकारले यो आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको केही क्षणमै बालुवाटारमै सत्ताढ नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठक बस्यो। जुन बैठकमा बालुवाटारमा आफैंले तोकेको भन्दा ५-६ गुणा ज्यादा मानिस मानिस एकै ठाउँ थिए।
बैठक सकिएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीलाई सञ्चारकर्मीले सोधेका थिए-सरकार आफैं निर्णय गर्ने, आफैं यस्तो बैठक गर्ने?
तर जवाफमा उल्टै ज्ञवालीले चेतावनीयुक्त शैलीमा भने-त्यसो भए त अब तपाईंहरुलाई समेत यसरी आउन दिनुभएन।
उनले आदेशलाई सरकारले पनि पालना गर्ने नै दाबी गरे। तर ज्ञवालीको दाबी ‘हिड्छै छ, पाइला मेट्दै छ’मात्र सावित भएका छन् । किनकि सरकारका ती आदेश सरकारी पक्षबाटै उल्लंघन भएका छन् र, सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। किनकि ६ गतेको आदेश ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएयता मात्र प्रधानमन्त्री ओली आफैं सहभागी भएर कार्यक्रम गरिएका छन् ।
वैशाख ९ गतेः
हुन त ९ गते बल्खुमा पार्टी कार्यालाय शिलान्यास र थापाथलीमा नयाँ कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित थिए। तर कानूनी नियमले पूर्वतालिका हेर्दैन। बल्खुमा पार्टी कार्यालय शिलान्यास गर्दा होस् वा थापाथलीमा उद्घाटन गर्दा सरकारी मापदण्ड २५ भन्दा धेरै मानिसको उपस्थिति थियो।
यदि सरकार साँच्चै आफ्नो निर्णयप्रति प्रतिबद्ध थियो भने शिलान्यासको मिति सार्न सकिन्थ्यो वा सीमित व्यक्तिमात्र गएर गर्न सकिन्थ्यो । बालुवाटामा बसेर विभिन्न आयोजनाको शिलान्यास गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी कार्यालय भवनको उद्घाटन पनि त्यसैगरी गरेको भए झन् राम्रो सन्देश पनि जानेथियो।
६ गतेको बैठकको निरन्तरता भन्दै १० वैशाखमा बालुवाटारमा पुनः हुलका हुल मानिस जम्मा भए। सामाजिक दूरीको मापदण्ड त बालुवाटारको हलमा मानौं अन्जान जस्तै थियो ।
रिपोर्टिङमा खटिएका सञ्चारकर्मीको बाध्यता उस्तै । आफैंले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गरिरहेको सरकारी पार्टीको समाचार रिपोर्टिङ गर्न सञ्चारकर्मीहरु भीड नबनी जानुको विकल्प पनि त थिएन !
यो दिन हुन त सबैका लागि व्यग्र प्रतिक्षाको दिन थियो । २०७२ को विनासकारी भूकम्पले ढलेको नेपाली आस्था र प्रतिष्ठाको धरोहर धरहराको उद्घाटन गर्ने तिथिमिति धेरैअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।
कोरोनाको बढ्दो संक्रमण, भयावह हुँदै गरेको अवस्थालाई देखिरहेको सरकारले उक्त उद्घाटनलाई केही समय पर धकेल्न सक्थ्यो। तर कार्यक्रम सरेन, बरु उद्घाटन हेर्न सयौंको उपस्थिति रह्यो ।
धरहराको २० औं तलामा पुगेर पुष्पबृष्टि गरेका प्रधानमन्त्रीलाई दृश्यमा कैद गर्न मात्र सयौं क्यामेरा तेर्सिएका थिए । र २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेर आदेश गर्ने प्रधानमन्त्री भने सयौंका अघि उभिएर कोरोनाबाट बँच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन र सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्न भनिरहेका थिए ।
तर अझै अचम्मचाहिँ के भने, विहान ठेलमठेल मानिसको उपस्थितिमा धरहरा उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्रीले साँझ बसेको सीसीएमसी बैठकमा मापदण्ड पालना नगर्नेमाथि कडा निगरानी गर्न र कारबाही गर्न उर्दी नै दिए ।
धरहरामा मानिसको ठेलमठेलको तस्बिरले सरकारलाई गिज्याइरहेकै थियो। आइतबार बिहान एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक अकस्मात डाकिएको खबर बाहिरियो ।
जुन बैठकले पार्टीभित्रको विवाद झन् चर्काउने आशंका भइरहेको थियो । तर निर्णय भने,पार्टीपंतिलाई कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रीत हुन भनिएको बाहिरियो ।
यद्दपि उक्त बैठकमा आफ्नै सांसदमाथि कारबाही गर्न लागिपरेका ओलीले केन्द्रीय सदस्यलाई ब्ल्यांक पेपरमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको खबर बाहिरिन धेरै समय लागेन ।
सत्ता टिकाउन र कुर्सी बचाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँ पनि २५ जनाको नियम चटक्क भुले ।
अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणले विश्व नै आक्रान्त बनेको र नेपालमा पनि हजारौं नागरिक रोग र भोकले त्रासदिपूर्ण जीवन काटिरहेका थिए, प्रधानमन्त्री ओली कुर्सी बचाउने धाउन्नमा थिए ।
यो पटक, छिमेकी मुलुकमै लास जलाउने स्थानकाे अभाव भएको मनै जलाउने तस्बिर बाहिरिरहेका छन् ।
नेपालगञ्ज, बाँकेलगायतका ठाउँका अस्पतालमा बेड अभाव भएर मानिसहरु छटपटाइरहेका दर्दनाक तस्बिर र भिडियो आइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हात उठाइसकेको छ, र भनिरहेको छ, ‘स्थिति हाम्रो काबुबाहिर जाँदै छ।’
सायद, अब पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता बचाउन छाडेर, जनता बचाउन नलाग्ने हो भने, भारतमा देखिएको दृश्य नेपालमा नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।